XOG: Franck Kessié oo berri caafimaadka u maraya AC Milan – Gool FM
XOG: Franck Kessié oo berri caafimaadka u maraya AC Milan
(Bergamo) 29 Maajo 2017 – Laacibka khadka dhexe ee sanadkan wacdaraha ka dhigay kooxda Atalanta ee Franck Kessié ayaa berri caafimaadka u maraya kooxda AC Milan, sida ay wararku sheegayaan.
Laacibkan Ivorian-ka ah ayaa si wayn todobaadyadii ugu dambeeyay loola xiriirinayay kooxda Rossoneri, waxaana la rumaysan yahay inay mar hore heshiis la meel dhigtay kooxdiisa si loo keeno gegada San Siro.
Haatan ayuu hilinka Sky sheegayaa in uu laacibku caafimaadka u marayo kooxdiisa cusub, taasoo noqon doonto berritoole 09:00 subaxnimo, isagoo caafimaadka ku mari doona ‘La Madonnina, kahor inta aanu tegin xerada Milanello oo uu heshiiska ku saxiixi doono.
Laacibkan 19-jirka ah oo 28 milyan oo euro ku imanaya AC Milan ayaa noqonaya laacibkii 2-aad ee kusoo biira Milan-ta cusub, kaddib Mateo Musacchio oo horay caafimaadka u maray una booqday Casa Milan, waloow aan weli la shaacinin heshiiskiisa, waxaa sidoo kale jidka kusoo jira Ricardo Rodriguez oo la sheegay in uu 18 milyan iyo bareemiyo uga imanayo kooxda Wolfsburg.
"Kulanka Real Madrid waa mid iska caadi ah" - Paulo Dybala